Red Mhuno Pitbull: Chii Chaunofanira Kuziva Usati Watenga - Inobereka
Red Mhuno Pitbull: Chii Chaunofanira Kuziva Usati Watenga
Iwe unogona kunge wakanzwa nezve red red nosed reindeer asi ko zvakadii Red Mhuno Pitbull?
Iyo Tsvuku Mhuno Pitbull ndeye tsvuku ine mvere uye tsvuku nosed American Pitbull Terrier.
Ivo ndeimwe yeiyo inonyanya kufarirwa Pitbulls kutenderedza uye kungofanana nemamwe maPigbulls vakavimbika uye vanodzivirira ..
Kupesana nekutenda kwakakurumbira iyi haisi imbwa ine hutsinye. Chero ani zvake akamboshandisa chero nguva yakawanda nerudzi urwu anoziva kuti ivo ndevamwe imbwa dzinotapira uye dzakapusa kupfuura dzimwe.
Iwe unofunga kuti Red Mhuno Pitbull inogona kunge iri nyowani nyowani yekuwedzera kumba kwako?
Ramba uchiverenga kuti udzidze zvese zvaunoda kuti uzive nezve rudzi urwu ...
Tsvuku Dzemhino Pitbull PaKutarisa
Tsvuku Mhuno Pitbull Ongororo
Rimwe Zuva MuHupenyu hweRudzi urwu
Nhoroondo Uye Chibviro
Kudzikama Uye Maitiro
Yakawanda Sei Iyo Tsvuku Mhuno Pitbull Inodhura?
Mutsvuku Mhuno Pitbull Kuonekwa
Tsvuku Mhuno Pitbull Yekutungamira Nhungamiro
Sei Kudzidzisa Rednose Pitbull Terriers
Iyi Red Nose Pitbull inotapira seshuga uye inoda kutenderedzwa nemhuri yavo.
Iyo Red Nose Pitbull inguva tsvuku tsvuku Pitbull imbwa ine mutsvuku mhino kuenderana. Nepo Pitbulls achiuya nemhando dzakasiyana dzemavara iyo Red Nose ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa. Idzi imbwa hadzizivikanwe chete nemhino dzvuku asiwo nemoyo yavo hombe nemweya munyoro.
Kuzivikanwa: # 3.
Speciality: Shamwari / Kushanda.
Kurema: 30-60 mapaundi.
Mutengo: $ 450- $ 2000.
Unhu: Akashinga, anoyevedza uye akavimbika.
Mutengo : $ 2000- $ 5000
Hupenyu : Makore 10-13
Yemhuri Yakanaka : Ehe
Saizi : 30-150 mapaundi
Yadeurwa : Pasi
Chiitiko : Pakati / Yakakwirira
Mutengo : $ 300- $ 2000
Hupenyu Makore: 12-14
Saizi : 22-40 mapaundi
Mutsvuku Mhuno Pitbull
Mutengo : $ 1000- $ 2000
Hupenyu Makore 10-15
Saizi : 30-60 mapaundi
Kuzivikanwa kweAmerican Pitbull Terrier kwakakonzera akasiyana mavara .
Imwe yemhando dzemhando dzakakurumbira ndeyeRed Nose Pitbull.
Uyu mwana anozivikanwa neyavo tsvuku tsvuku shava shava uye sinamoni yemavara mhino kuti ifanane.
Ivo vane muviri wakasimba kwazvo uye vanogara vachitakura pachavo nenzira ine chivimbo.
Zvinosuruvarisa kuti rudzi urwu rwembwa rwakave nedambudziko rapfuura sezvo ivo vaimbove vakafudzwa nekuda kwekucheresa bhuru uye kurwisa imbwa. Izvi zvakangowedzera uremu ku mukurumbira wavo sembwa dzinodenha .
Neraki mushure mekurwa kwembwa kwakarambidzwa vanhu vakatanga kuona kugona kwechokwadi mune aya maTerriers anoshanda nesimba.
Chokwadi ndechekuti pooch iyi anoda, kwete murwi.
Iyi goofball ine hushamwari uye inodikanwa inoda kuita senge hofori mbwanana.
Anodisa kwazvo uye anodadisa.
Unogona kudzidziswa kuchengetedza imba yako.
Imwe yeakareruka mvere dzemakwai kuti uwane.
Yakanaka kwazvo-chinangwa-chinoshanda uye imbwa yemhuri.
Izvo zvinorambidzwa mune mamwe masimba.
Anotambura kubva mukurumbira wakashata.
Inoda kushamwaridzana kwehupenyu hwese.
Hazvifambidzane nedzimwe mhando.
Yako Tsvuku Mhuno Pitbull ichave iri pamubhedha wako usiku hwese.
Vachave vakamirira imi vaviri kuti mutange zuva pamwe chete.
Kudya kwemangwanani kwakanaka uye kufamba uchitenderedza block ndiyo nzira yakanakisa yekutanga chero zuva.
Pooch yako inoda rudo rukuru uye kutarisirwa usati waenda kunoshanda. Kana vachinge vanzwa vakachengeteka uye vane chokwadi chekudzoka kwako vanozorora muketi yavo kana imwe nzvimbo yakachengeteka mumba yekumirira iwe.
Paunodzoka kumba uchibva kubasa panguva yekudya kwemasikati Pit yako ichakutswanya nekutsvoda kweslobbery.
Vanga vakamirira zuva rese kuti iwe uuye kumba uye utandare.
Ino ndiyo nguva yekutamba.
Tora imbwa yako kupaki kunotamba kutora kana kubata kana kuti varegedze vamhanye nesango neshamwari dzavo ina dzine makumbo.
Ndichiri kutamba neshamwari dzavo imbwa yako ichave nechokwadi chekuti iwe uri chikamu chemufaro zvakare. Muchave muchifara pamwe chete zvekuti mamwe masikati achabhururuka achidarika.
Paunodzoka kumba kubva kupaki ichave nguva yekudya kwemanheru.
Mushure meizvozvo yako Rednose Pitbull Terriers inozopedzisira yagadzirira kuzorora uye kuzorora - tarisa TV pamwe chete uye muve nesangano rekumbundira pasofa. Manheru ekuzorora uye ekuzorora anokosheswa zvikuru mushure mezuva rakadaro rekushanda nekutamba.
Panguva yekurara shamwari yako yemhino mutsvuku ichabatana newe pamubhedha wako kana kunyangwe kumonera kumusoro kwetsoka dzemubhedha wako.
Rudzi rweAmerican Pitbull Terrier rwakatanga kuberekwa muEngland.
Kubva apa Pitbull akaenda kuIreland uko iyo Red Nose Pitbull yakaberekwa kekutanga.
Iro zita Pitbull inoreva yavo basa rekutanga senzombe yekudyira . Mapake embwa idzi akaiswa munhandare neimwe nzombe uye mapoka akatariswa imbwa dzaizoedza kutora nzombe pasi.
Imbwa chete dzakaberekerwa zvehasha dzaigona kubata basa rakadai kuti vafudzi vaizobatanidza imbwa dzine hukasha pamwe chete.
Imbwa dzakadzidziswawo kuva nehasha vachishandisa kuranga kwakasimba uye kuranga.
Kana kubhairira bhuru kwakarambidzwa kukoshesa yakachinjiswa kurwisa imbwa .
Neraki iyi tsika inotyisa ikozvino yarambidzwa asi mukurumbira waPitbull semurwi ane utsinye wasara.
Sezvo mukurumbira werudzi urwu wakakwira muAmerica vakapedzisira vapihwa zita rekuti American Pitbull Terrier.
Zvinosuruvarisa hazvo rudzi urwu rwuchiri kurambidzwa mumatare mazhinji.
Rudzi irworwo rwakanyoreswa kunge mhuka ine njodzi yekurwisa.
Basa riri kuitwa kubatsira rudzi urwu kukunda mukurumbira waro uye bereka yakatarwa mitemo iri kuwedzera kushomeka gore rega rega.
Ndinovimba mumakore anouya kuziva kwakakwana kunosimudzwa kuratidza rudzi urwu rwechokwadi.
6 Kunakidzwa Chokwadi
Iyo Red Nose Pitbull inouya chaizvo kubva kuIreland, kwete United States.
Ipo chimiro chavo chinoshamisira chichivaita sarudzo yakakurumbira kune imbwa inorinda ivo vanowanzoita hushamwari nemupinyi pane kuyedza kutyisidzira munhu kure.
Pitbulls vaimbozivikanwa sembwa nanny nekuda kwerudo rwavo rwevana. Varidzi vazhinji vaitovimba nembwa dzavo nebasa risiri pamutemo rekuchengeta vana.
Zvinosuruvarisa kuti rudzi urwu nderumwe rwezvinangwa zvakajairika zverudzi chaiyo mutemo. Mapoka akati wandei evatendi anozvipira kusimudzira kuziva kweiyo Pitbull chaiyo uye kupedza marambidziro emakanzuru parudzi.
Iyo Red Nose ndeimwe yemarudzi mazhinji akasarudzika anogona kuve nerudzi urwu - unogona kuwana rudzi urwu mune chero chero ruvara (kusanganisira bhuruu uye brindle).
Zvinosuruvarisa rudzi urwu haruzivikanwe neAmerican Kennel Club nekuda kwekunetseka kwavo kwakapfuura.
Iyo Red Nose Pitbull ndeimwe yeiyo imbwa dzinotapira kumativi .
Ivo vanongoda chete kupedza nguva nemhuri yavo uye vanonakidzwa kuve pakati pekucherechedzwa.
Kungofanana nedzimwe mhando dzinoshanda kunyange dzichinyatso shanda uye dzichida kuchengetwa dzakabatikana.
Pese pavanonakidzwa nekuzorora ivo vachazoda kupedza zuva refu vachitamba vasati vagadzirira kumonera pamubhedha.
Ivo vanofarira echinyakare imbwa yemitambo mitambo senge kutora asi ivo vanodawo kugona uye rally.
Iwe unofanirwa kutarisira imwe ruzha kana pooch iyi ichinzwa kufara kana kutamba, kana kana chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka mumba.
Nekudaro Pitbull yakanyatsodzidziswa haifanire kuhukura kune vavakidzani kana dzimwe mhuka.
Kana zviri zvekudyidzana iwe unofanirwa tanga kushamwaridzana ivo sembwanana.
Kushamwaridzana kwakanaka nevamwe vanhu uye imbwa kwakakosha kuti uchengetedze pooch pane yavo yakanaka maitiro. Gomba imbwa yemagariro inoshuvira kutariswa uye hushamwari.
Ingo rangarira kuti iyi imbwa haina kusanganisa mushe uye inogona kudzingirira imbwa diki nekitsi.
Chero Pitbull inoratidza hutsinye kana kusundidzira vamwe padhuze vanofanirwa kudzidziswa kubva pahunhu uhwo nekukurumidza sezvazvinogona.
Vana vadiki vanotamba kuruma kuti vaedze meno avo matsva, nepo imbwa yakura ingaruma kana ichinzwa kutya kana kushushikana.
Iyo modhi Red Nose Pitbull ine hushamwari, yemagariro uye yakangwara kwazvo.
Ivo vanoita yakanaka imbwa yemhuri uye vanonakidzwa nekuve nevana padhuze kutamba navo. Rudzi urwu rwakanaka kune vakaroorana kana kumhuri dzine vana vanopfuura makore matanhatu apo ivo vachazopihwa yakawanda rudo uye kutarisirwa mukati mezuva rese.
Kana iwe ukaratidza iyi imbwa rudo uye rukudzo rwakakodzera ivo vanokupa iwe kusingagumi kuvimbika.
Sezvo Red Mhuno Pitbull yakajairika ivo vakachipa pane mamwe mavara.
Iwe unofanirwa kutarisira kubhadhara kutenderedza $ 1000 kune mbwanana.
Mutengo wekutanga zvinoenderana nekwaunowana shamwari yako nyowani.
Pane pekugara iwe uchabhadhara madhora mazana matatu nemakumi mashanu kwauri iwe Red Nose uye mari yacho ichaenda kunobatsira kuchengetedza imba kune dzimwe mhuka.
Sezvo iro vara riripo zvakanyanya ivo vari iwo akanyanya kubheja kune mumwe munhu ari kutsvaga Pitbull pabhajeti.
Mbwanana $ 1000- $ 2000
Mukuru $ 600- $ 1000
Kugamuchirwa $ 350- $ 450
Mutsvuku Mhuno Pitbull ndeimwe yeakajairika Pitbull mavara saka iwo anowanzo kuve akanyanya mutengo mutengo Pitbull.
Kubva kumuchengeti iwe unofanirwa kutarisira kubhadhara inosvika $ 1 000 yeRed Nose puppy.
Kana izvi zvichikudhurira saka funga kutora imwe kubva kune pekugara - zvinosuwisa kuti rudzi urwu nderimwe remapfuyo anowanikwa munyika.
Iwe unozofanirwa kufunga nezve zvakakosha zvekushandisa mune yako bhajeti futi. Zvinhu zvakaita setambo, imbwa crate uye matoyi anogona nyore kuwedzera mamwe madhora mazana mashanu pamutengo wese.
Iyi imbwa haizive yavo simba ichabvarura matoyi mazhinji. Iwe unofanirwa kutarisira kushandisa inosvika madhora makumi matanhatu nemashanu pamwedzi mishoma kutsiva chero matoyi angangodaro akaparadzwa negomba rako.
Zvinotoshamisa kuti imbwa iyi haina mhando yepamutemo yekuberekesa.
Nekudaro iwe unogona kutarisira a iri pakati nepakati tsandanyama imbwa .
Ivo vane yakafara dehenya rine yakafara tomu uye kunyemwerera kukuru.
Nzeve dzavo dzinogona kumira dzakatwasuka kana kupetwa zvishoma asi ivo haifanire kumbobvarurwa . Kungofanana nemazita avo anoratidza kuti vane mhino yakatsvukuruka yemhino uye izvi zvinogona kutaridzika zvichienderana nemwaka.
Pakazara iyi imbwa yakasimba uye ine chivimbo yekutarisa.
Iwe unogona kutarisira murume Red Nose kumira pakati pe18-21 inches inches uye kurema pakati pe35-60 mapaundi.
Vakadzi vangori vashoma zvishoma uye vanomira pakati pe 17-20 inches uye vanoyera pakati pe30-50 mapaundi.
Kunyanya yakakura saizi Pitbulls inogona kukura kusvika makumi manomwe mapaundi kana vari varume uye makumi matanhatu emapaunzi kana vari vanhukadzi.
Imbwa iyi ine bhachi tsvuku tsvuku.
Dzimwe nguva vane dumbu jena uye kumeso zvakare.
Imbwa iyi ine bhachi pfupi uye yakaoma imwe chete ipfupi. Unogona kunzwa mhasuru yembwa iyi iri pasi pejasi radzo paunenge uchiibata.
Neraki sezvo vane hupfupi furufu havadurure zvakawanda.
Ipo iyo Mutsvuku Mhuno Pitbull iri imbwa chaiyo havadi kuchengetedzwa zvakanyanya.
Muridzi ane rudo uye ane mutsa iyi imbwa yese inoda kufara uye kugwinya.
Iyi imbwa inodawo muridzi anoshanda uyo anogona kumhanya achitenderera nekutamba chaiko zuva rese. Ivo havafanirwe kumbosiyiwa pamba vega kweanopfuura maawa mashoma panguva, saka varidzi vasipo havafanirwe kunyorera.
Iye anoita sumo huru kumarudzi anodheerera uye unongoda kuve shamwari yako yepamwoyo.
Pamusoro pazvose muridzi weRed Nose Pitbull anofanirwa kunge akazvipira zvizere kudzidziswa uye kufambidzana kuburikidza nehupenyu hwese hwembwa.
Idzi imbwa dzinoda chero awa yekurovedza muviri zuva rega rega.
Unogona kupatsanura izvi pakati pekufamba uye nekumhanya.
Mhando dzese dzevanodheerera dzinofanirwa kuchengetwa pane yavo leash pavanenge vachifamba vachifamba - off leash play inofanira kuitirwa munzvimbo yakachengeteka, yakachengeteka. Unogona kuvafamba kwemaminetsi makumi matatu pazuva uye wobva wawedzera maminetsi makumi matatu kusvika kumakumi mana ekutamba kuti upedze zuva rembwa yako.
Kumhanya ndiyo imwe yenzira dzavanofarira kuti varambe vakagwinya.
Rudzi urwu runotamba chero chinhu chinosanganisira kutora, kubata uye tag. Nekudaro ivo vanobudirira mune rally iyo inosanganisa kuteerera uye kugona.
Zviitiko Zvezuva Nezuva: Maminitsi makumi matanhatu.
Chiitiko Chekuita: 4/5.
Chaunofarira Chiitiko: Rally.
Red Pitbull iyi pfupi uye gobvu jasi iri nyore kwazvo kutsvinda.
Kuti vachengetedze jasi ravo dzvuku rakapenya uchazoda kukwesha kamwe chete pasvondo.
Munguva yechirimo uye kudonha iwe unogona kucherechedza mamwe mashoma vhudzi rakadonhedzwa kupfuura zvakajairwa. Izvi zvinodaro nekuti imbwa yako iri kugadzirira yavo mwaka jasi. Pakati peino nguva iwe uchafanirwa kukwesha iwo 2-3 pasvondo panzvimbo.
Pitbulls inoda yakawanda yekuchenesa pane kukwesha (kunyanya kumeso nenzeve). Shambidza mwana wako mwedzi wega wega uchishandisa imbwa yakachengeteka shambuu uye inogadzirisa.
Kana imbwa yako iine kumeso zvakapetwa saka zvakakosha kuti uchengetedze kumeso kwavo kwakachena. Shandisa zvakapfava kumeso kupukuta kana imbwa inoshamwaridza spa mask kuchengetedza ivhu kubva kuunganidze kutenderera pamhino, maziso uye tomu. Chekerera nzara dzadzo mavhiki maviri kana matatu ese uye kwesha imbwa yako mazino kamwechete pasvondo. Zvinogona kuve zvakaoma kuti imbwa yako ikoshese bhurosi remazino kuti iwe ugone kuvakurudzira neinonaka mushonga wemazino kana kurapwa kwemazino.
Imbwa inoshanda uye ine mhasuru seiyi inoda mapuroteni mazhinji.
Muchokwadi mapuroteni anofanirwa kuve wekutanga chigadziro mukudya kwavo. Mapuroteni kubva kunobva nyama chaiko inosimudzira hutano musuru mamiriro uye kukura.
Iyo Red Nose Pitbull inoda kusvika ku1000 macalorie pazuva reprotein kibble kana nyama mbishi.
Unogona kupatsanura izvi kuyana kudya kwechipiri (mangwanani nemanheru). Kudya kwembwa yako kwakareruka kunofanirwa kupihwa pavanotanga kunonoka kupera kwezuva. Panguva yekudya kwemanheru zvakanaka kuvapa hafu yekapu pane kungozadza kapu. Kudya kwavo kukuru kunofanira kuuya pakudya kwemangwanani.
Zvizhinji zvekudya kwembwa zvinofanirwa kunge zvakagadzirwa nemapuroteni uye mafuta ane hutano anobva kunzvimbo dzechisikigo kwete zvekuwedzera uye zvigadzirwa.
Kubata kunofanirwa kupihwa mune zvidiki chete.
Pakati pemwedzi miviri nemitanhatu mbwanana yako inenge yasvika hafu yehuremu hwevakuru. Izvi zvinofanirwa kuve makumi maviri nemakumi matatu emapaunzi echirume uye 15-18 mapaundi emukadzi.
Imbwa yako inofanira kusvika pahukuru hwayo nguva pfupi mushure mekuzvarwa kwavo kwekutanga. Kune yechirume izvi zvinofanirwa kunge zviri pakati pe40-60 mapaundi (kana kusvika makumi manomwe pamakumi matatu ePitbulls akakura). Vakadzi vanoyera pakati pe30-50 mapaundi.
Ipo iyo Red Nose Pitbull iri rudzi rwakasimba kuchine zvishoma zvezvinhu zvaunofanira kungwarira.
Patellar zororo chirwere chekubatana izvo zvinonyanya kuitika muimbwa diki asi zvinogona kukanganisa imbwa dziri pakati nepakati sePitbull. Izvi zvinoitika kana patella isina kugadzikana uye iri nyore kutsemuka. Zvinokonzeresa kurwadziwa uye kusagadzikana, nyaya dzekufamba uye pakupedzisira chirema. Kurapa kunoenderana nedanho iro mamiriro arimo asi pazviitiko zvakanyanya ivo vachada kuvhiyiwa. Padanho 1 ne2 patella inogona kuendeswa pamunhu. Nekudaro padanho 3 kana 4 patellar luxation ingangoita inoda kuvhiyiwa kugadzirisa.
Degenerative myleopathy ndeimwe yemamiriro akaomesesa ayo rudzi urwu runogona kukura. Inowanzoitika muimbwa dzinenge makore mapfumbamwe ekuberekwa. Aya mamiriro anoita kuti rwonzi rwepelinha ruderedze uye runogona kutungamira kusarura uye pakupedzisira kupora mitezo. Zviratidzo zvekutanga zvinosanganisira kukwevera makumbo uye kurasikirwa kwekuyera pamwe nekubatana. Iwo majoini anogona kukiya kumusoro nguva nenguva sezvo mamiriro achienderera. Kuoma mitezo yemakumbo ekumashure uye kurasikirwa zvachose kwekufamba kuchazotevera. Nehurombo mamiriro ari 100 muzana anouraya.
Yakareba Sei Iyo Tsvuku Mhuno Pitbull Kurarama?
Red Mhuno Pitbull inogona kurarama chero pakati pemakore gumi negumi nemashanu.
Iwe unofanirwa kutanga kudzidzisa yako Rednose Pitbull Terrier nekukurumidza kana iwe ukauya nembwanana yako kumba.
Panguva yekudzidzira iwe unofanirwa kugara wakasimba asi uchienzanirana.
Gara uchibata imbwa yako neruremekedzo iyo yaanoda kukurudzira iyo imwechete kukuremekedza iwe.
Iyi imbwa chishuwo chechisikirwo chekufadza vamwe zvinoreva kuti vanopindura zvakanaka kwazvo kurumbidza nehunhu hwakanaka. Hunhu husina kunaka hunofuratirwa sezvo mwana ari kungoedza kutora pfungwa dzako.
Tsvuku Dzemhino Pitbulls zvinokurudzirwa nerudo uye nekurumbidza kupfuura nekubata.
Saka pavanopedza kuraira nenzira kwayo varumbidze nekuvapa rudo nechidakadaka.
Zvemagariro zvakanyanyisa kukosha zverudzi urwu. Iwe unofanirwa kuenda nembwa yako kunzvimbo kwainogona kusangana zvakanaka nevamwe vanhu uye imbwa. Kirasi ine hunyanzvi yekudzidzira kirasi ichave yakaoma kuwana saka yakawanda yekudzidzira inoda kuitirwa kumba.
Mbwanana yako inofanira kugara iine nzvimbo yakachengeteka uye yakarongeka yekudyidzana nedzimwe imbwa dzine saizi yakafanana nehunhu.
Kurovedza iri zvakare nzira huru yekuvaramba vachikurudzirwa.
Kufinhwa ndeye Pitbull's isinganyanye kufarira mamiriro epfungwa uye kazhinji inotungamira kune inoparadza maitiro.
Tambo kukanda mutambo wakanaka zvese zvekudzidzira uye kurodza pfungwa dzavo. Paunenge uchitamba iwe unogona kudzidzira kuraira senge kugara, kugara, kurasa pasi uye woenda.
Vanozoda kuchengetwa mupfungwa vakabatikana kudzivirira chero hunhu hunokuvadza.
Usambofa wakazvidza pfungwa dzakangwara kupfuura iwo madiki maziso anotapira.
Sekukura kukuru kweTerrier vanogona kudzidziswa kune akasiyana marudzi ebasa.
Ivo vanowanzo shandiswa sevatariri kana imbwa yevarindi. Rudzi urwu dzimwe nguva runodzidziswa sembwa yebasa kana mapurisa K-9 futi.
Usarega nhoroondo yeRed Nose Pitbull ichikunyengera.
Iyi imbwa inotapira seshuga uye inongoda kudiwa.
Kutora parudzi urwu makore gumi kuzvipira uko asiri munhu wese anokwanisa kuita.
Mhuri dzakazvitsaurira dzine vana vakuru mumba dzichada iyi imbwa nyoro mweya. Varidzi vasina murume vanounza imba imwe havazombofanirazve kusurukirwa. Pitbull anongoda chete kuziva kuti unovada zvakadii. Kana iwe uchibata imbwa yako nerunako rwakakodzera ivo vachakuda iwe iko kudzoka.
Imbwa inogona kunge iri goofball hombe asi hazvireve kuti ivo havana kungwara.
Kuti imbwa iyi ive pane zvavanogona inoda kuchengetedzwa ichishanda.
Izvi zvinoreva kupedza mazuva mazhinji uchitamba mitambo uye uchidzidza hunyengeri hutsva.
Red Mhuno Pitbull ishamwari yeupenyu hwese yausingazombokanganwa. Kana iwe uchigona kugadzira nzvimbo mumoyo mako kune imwe inokwana mukati chaimo.
Tiudze chero imwe yemibvunzo yako nezve iyi Red Nose muchikamu chemashoko pazasi ...
14 Imbwa Dzimba Dzinotaura Kunze: Izvo Zvaunofanira Kuziva KUSVIRA Kugamuchira Imbwa
yakakura sei chorkies inokura
mazita evafudzi vechikadzi vechikadzi
akazara akura white sirian husky
Jack russell terrier uye chihuahua